raha vao naharay ny tatitra avy amin’ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary BNGRC. Tamin’ny alalan’ny « asa tana-maro » no nametrahana ireo gony marobe misy fasika ho fanamboarana ireo valam-parihy tao amin’ny distrikan’Ambatondrazaka sy Amparafaravola. Izany asa tana-maro izany dia nahafahana nitsinjo ankohonana traboina miisa 2.100 ao amin’ireo kaominina 4 (Ilafy, Ambatondrazaka, Tanambe ary Beanana) anatin’ny distrika 2. Izany dia mba nahafahan’izy ireo nihoatra tamin’ny voina sy namerina haingana ny fiainana ho toy ny andavanandro. Nandritra ny 20 andro niasana dia nandray ny tambiny misanda ho 5.000 Ar isan’andro ireo mpisitraka rehetra nitsinjara tamin’ireo toerana 15 nanaovana ny asa. Etsy an-danin’izany, hisy ihany koa ny fanadiovana sy fanamboarana ireo lakan-drano mitsinjara amin’ny toerana 16 manomboka ny 17 febroary 2020 ho avy izao. Ho fanampin’ireo distrika 2 voalaza etsy ambony ireo dia i Moramanga no ho anisan’ireo distrika hanaovana ny asa fanadiovana, haharitra 10 andro izany ary ankohonana miisa 2.400 no hisitraka izany.